The Tupolev Tu-134 (NATO koodu Crusty) bụ a ndi nkiti airliner ejima-engine Soviet, nke yiri nke American Douglas DC-9. Ọ bụ otu n'ime ndị ụgbọ elu na-eji ọtụtụ ná mba nke Warsaw mmeko. The ọnụ ọgụgụ nke ugbo elu ugbu a na ọrụ na-kpukpru usen n'ihi iwu ịmachi mkpọtụ.
Tu-134A: Nke abụọ version na ọzọ dị ike engines, mma avionics na a ike nke 84 njem. Na ihe nile variants e wuru na pụrụ iche iko imi dome na Rada na n'ihu igwefoto,
a add-on bụ maka ndị siri ike simmers, ị ga-agụ akwụkwọ ntuziaka (n'asụsụ Bekee na Russian) ma ọ bụghị, ị gaghị enwe ike ịmalite injin ndị ahụ, a ga-emepụta ụzọ mkpirisi na ya na desktọpụ gị.
The 2D panel na-nnọọ mgbagwoju, ụda na-aruputaghari ọma, na visual nlereanya bụ ihe ịga nke ọma, na-agụnye 4 repaints
Onye edemede: Soviet Ochie Ịme anwansị